अमेरिकामा ड्राइभिङ गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु - DhanSanchar - Number 1 Digital Newsportal From Nepal
अमेरिकामा ड्राइभिङ गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
तपाँइ अमेरिकि कुनै पनि सडकमा गाडी हाँक्दै हुनुहुन्छ। कथमकदाचित कुनै पनि पुरुष वा महिला मध्ये सडक​, सडकको साइडमा बसि हातको बुढि औला तेर्स्याएर बसेको देख्नु भयो भने तपाइ के गर्नु हुन्छ​?
यसरि सडकको किनारा वा साइडमा बसि, उभिएर वा हिडदाहिड्दै बुढि औला तेर्स्याउनुको कारण तपाइलाइ थाहा छ त​?
यसको मतलब तपाइसङ्ग उसले वा उनले तपाइकै बाटो तर्फ राइड अर्थात तपाइको गाडीमा ठाउ दिएर पुर्याइदिन बिनम्रता पुर्बक अनुरोध गर्दैछ तपाइसङ्ग​। तपाइको गाडीमा राइड लिएर कहि कतै सम्म ओरालिदिन वा कहि कतै तपाइको बाटो तर्फ जाने सकेत गर्यो।
अब के गर्ने त गाडी साइडमा रोकेर चढाइदिने अर्थात राइड दिने कि नदिने त​?
यस्तो अबस्थामा सकेसम्म राइड नदिनु। को मानिस कस्तो भन्ने तपाइलाइ थाहा छैन​, तपाइ उसलाइ वा उनलाइ चिन्नु पनि हुन्न र उसले डलर दिएर वा सित्तैमा तपाइसङ्ग कहि पुर्याइदिन गरेको हातको सकेत अनुरोध मान्नै पर्दछ भन्ने पनि छैन​। कुनै पनि हालतमा यस्तो अबस्थामा बुद्दि पुर्याउनुहोस र राइड दिने काम नगर्नु होला। त्यस्ता मानिस अपराधि पनि हुनसक्दछ​। बाटोमा तपाइलाइ छुरा, बन्दुक देखाएर लुटिदिन सक्दछ​। तपाइसङ्ग कुनै हिसाबले बार्गेनिङ्ग गरि डलर थुत्न सक्दछ​। महिला परे तपाइलाइ कानुनि रुपमा ब्लेम लगाइ फसाइदिन सक्दछ​। गाडीमा तपाइलाइ अपहरण​, बलात्कार कुनै सेक्सुअल हर्यासमेन्टमा जाकिदिन सक्दछ​।
यसको अलावा राइड दिएका यस्ता मानिससङ्ग तिनका साथमा कुनै प्रकारका लागु पदार्थ रहेछ कथमकदाचित प्रहरिद्वारा सोधपुछ​, खानतलासि र सोधपुछमा तपाइले राइड दिएको मानिस गाडीमै छ भने उक्त लागुऔषधको कानुनि भागिदार तपाइ पनि बन्नुहुनेछ​। बिनाकारण तपाइलाइ हर्ट गर्न सक्दछ त्यसैले नचिनेका, अन्जानका मानिसलाइ राइड दिएर फस्ने काम कदापि नगर्नुहोला अमेरिकामा।
कथमकदाचित तपाइ आफुलाइ सडकमा आफ्नो गाडी बिग्रियो वा कुनै कारणबस गाडि चलाउन सक्नु भ​एन भने ९११ कल गरि प्रहरिको सहायता माग्नुहोला। उनिहरुले तपाइलाइ सहयोग गर्नेछन​। साथमा आफ्ना भाइसाथि वा आफन्त पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ राइडका लागि। अन्यथा तपाइको इन्सुरेन्समा रोडसाइड सहायता तपाइको अटो पोलिसिमा थप्न लगाइ सडकमा राइड आबश्यक भ​ए रोड एसिस्टेन्टको सहायता लिन सक्नुहुनेछ​। यसका लागि आफ्नो रोड एसिस्टेन्ट​, आफ्नो इन्सुरेन्सको कपि वा सम्पर्क फोन नम्बर साथमै राख्नु हरदम​।
तर​, सडकमा फ्युल तेल सकिएर बसेका मानिस​, घाइते भै बसेका मानिस वा गाडी बिग्रेर बसेका मानिस​, बच्चा र तिनका बा आमाका लागि ठाउ हेरेर​, घटनाको परिस्थिति हेरि राइड दिन सकुहुनेछ तर यो भन्दा पनि आफैले प्रहरि बोलाइदिएर सहयोग गरेको सबैभन्दा बुद्दिमानि हुनेछ​। बि केयरफुल​।